Ungasisebenzisa nini futhi kanjani isidakamizwa i-Primperan | Izinja Umhlaba
Uyisebenzisa nini iPrimperan
El I-Primperan umuthi kukhonjiswe lapho kuvela khona izinkinga zamathumbu. Isidakamizwa esifanele izingane nabadala, kanye nezinja, ngoba odokotela bezilwane abaningi bayancoma.
Yize kuliqiniso ukuthi izinja zivame ukuba nemithi yazo, kukhona eminye yabantu engasetshenziswa ngendlela efanayo nasezinjeni, njalo ngaphansi kadokotela kadokotela wezilwane nokuhlonipha imithamo, engahlukahluka. Lo muthi waziwa kakhulu ngokusiza isisu ukuthi sizisethe kabusha uma kunezinkinga.
1 Yini iPrimperan
2 Ngaphambi kokunikeza uPrimperan
3 Kungani inja ihlanza
4 Ukukhathazeka nini
5 Ungayiphatha kanjani iPrimperan
6 Ezinye izinyathelo
7 Ukuphendula okungenziwa yinja yakho nge-Primperan
8 Ezinye izindlela zokusebenzisa iPrimperan
9 Okungafanele ukwenze nenja yakho lapho ihlanza
9.1 Ukunikeza imithi ngaphandle kokubonisana
9.2 Linda kudlule
9.3 Hhayi ukumfunza
Uhlobo olujwayelekile lwalesi sidakamizwa yi-metoclopramide, futhi luchazwa njenge-antiemetic. Lokhu kusho ukuthi okwenziwa umuthi kuvimbela isenzo sokuhlanza kanye nesicanucanu lapho sizizwa kabi. Imvamisa isetshenziselwa ukuvimbela isicanucanu ekwelashweni noma ekwelapheni isicanucanu nokuhlanza okungenzeka ngenxa yezizathu ezahlukahlukene, kusuka ku-migraines kuya kubuthi. Lesi sidakamizwa senzelwe abantu, yize odokotela bezilwane abaningi besebenzisa izinja ngoba azibathinti kabi futhi imiphumela yayo iyafana neyabantu.
Ngaphambi kokunikeza uPrimperan
Imithi ingadala izinkinga ezinjeni ezinesifo noma inkinga, ngakho-ke okokuqala akufanele nanini sinikeze umuthi ngaphandle kokuyalelwa nokuqondiswa udokotela wezilwane. Lo muthi uvame ukunganconywa uma kunezinkinga zokungezwani komzimba nezakhi, lapho kunezinkinga zesisu ezinjengokugcotshwa noma ukopha, lapho kunesifo sokuwa noma izinkinga zezinso noma zenhliziyo. Kunoma ikuphi, udokotela wezilwane kufanele enze ukuhlolwa kwesimo sempilo yenja ngaphambi kokunikeza imishanguzo ukuze aqiniseke ukuthi ayibangeli nkinga engaba yimbi.
Kungani inja ihlanza
Kunezimbangela eziningi ezahlukahlukene zokuthi kungani izinja zingahlanza. Uma kuyinto ethize futhi sibona ukuthi akaphindisi futhi aqhubeke nokudla ngokujwayelekile ngokulula kukhona okuzobe kumphathe kabi. Kufanele usizwe isisu ukuze ubone ukuthi sibuzwa yini ubuhlungu. Kepha ezikhathini eziningi ukuhlanza kuhlobene nezifo ezenza isimo sibe sibi kakhulu ngoba zivela kumagciwane athile aqinile afaka ngisho nokubeka engozini impilo yenja efana ne-parvovirus noma i-distemper. Kulezi zimo ukuvakashelwa kudokotela wezilwane kufanele kusondele, ngoba iPrimperan izobasiza kuphela ukuthi bahlanze kancane kepha ngeke iyelaphe inja.
Inja nayo ingahlanza ngoba inakho izinkinga zesisu, njengesilungulela noma nje isisu esibucayi. Kulezi zimo, kuzobaluleka ukuvumelanisa ukudla kwenja nokusebenzisa okuphakelayo kwekhwalithi, okunye okwenzelwe izinja ezibucayi kakhulu noma kulabo abanezifo ezithile zomzimba.
Enye imbangela yokuhlanza kungaba izimuncagazi zangaphakathi. Izinja kumele zisuswe izikelemu ngaphakathi nangaphandle ngezikhathi ezithile, ngakho-ke lokhu kufanele kugcinwe kusesikhathini. Uma banezinambuzane eziningi zangaphakathi, lokhu kuzodala izinkinga emathunjini nasesiswini okungaholela ekuphalazweni nasekukhanyeni.
La inja yokudla Kungadala nezinkinga zesisu, ikakhulukazi uma sikuguqula kungazelelwe. Inja izobe isivele isencane iye ohlotsheni lokudla futhi uma siyishintsha noma inenkinga ingayenza ingakubekezeleli ukudla okuthile bese igcina ihlanza, yize kulezi zimo ngokulungiswa kokudla sizoba nakho konke ngaphansi kokulawulwa.
Okunye okungenzeka uma sibona ukuthi inja ihlala ihlanza lokho kufakwe ubuthi. Kulokhu, kufanele ngaso sonke isikhathi siye kudokotela wezilwane simnikeze imishanguzo futhi sisebenze ngokushesha, ngoba abanye ubuthi bungafaka impilo yenja engcupheni. IPrimperan izokusiza ukuthi ululame uma usulashelwe ubuthi.
I-Primperan isetshenziswa lapho inja inokuhlanza okuningi nohudo, okuyi le kungaholela ekuphelelweni ngamanzi emzimbeni. Uma kuwumdlwane noma inja endala, lesi simo sikhathaza kakhulu, ngoba basengozini yokuthola lezi zimo. Kunoma ikuphi, lapho inkinga ixhunyaniswe nokugula okubi kakhulu, kufanele uye kudokotela wezilwane. Futhi uma singazi ukuthi singayibona kanjani imbangela yokuhlanza, kubalulekile ukwenza ukuhlolwa kwezempilo ukuthola imbangela, kungaba ngenxa yokudla noma igciwane.
Ungayiphatha kanjani iPrimperan
Isidakamizwa i-Primperan kufanele ilawulwe ngokwesisindo futhi ngokuya ngezidingo zenja. Kuzoba ngudokotela wezilwane okufanele asinikeze umhlahlandlela wokuyiphatha futhi singadluli ngomthamo, ngoba ayifani nemidlwane njengezinja ezindala futhi nesisindo nakho kubalulekile. Lapho sesinayo imihlahlandlela, kufanele sinikeze isiraphu ngendlela esinqume ngayo. Ezimweni lapho inja igula kakhulu, udokotela wezilwane angahlaba inja ukuze kube lula ukuyiphatha nokusebenza ngokushesha. Landela udokotela wezilwane ukubona ukuthi inja iyathuthuka yini ekwelashweni.
Ukuqinisekisa impilo enhle yenja yethu yisikhuthazo sokugcina sokwelashwa njengePrimperan, egxile enkingeni eyodwa. Ngenjwayelo ukuhlanza kuvame ukubangelwa ezinye izinto eziningi futhi kulezo zimo kufanele kube ngudokotela wezilwane onquma enye indlela yokwelashwa egcwalisa leyo kaPrimperan. Lapho inkinga isisu, kufanele kwenziwe ezinye izindlela ezifuna ukubuyisela impilo yenja.
Enye yezinto okufanele ibhekwe ngokungangabazeki ukudla kwenja. Kulezi zikhathi lapho egula khona, nakanjani ngeke adle kakhulu, kodwa singakunika uketshezi olunosawoti wamaminerali ukukusiza ukuvuselela amanzi. Ngakolunye uhlangothi, indlela yokudla kufanele iqale ukwenziwa ngokucophelela, ngokudla okufana nerayisi eliphekiwe nenkukhu ephekiwe. Lolu hlobo lokudla luzokusiza ukuthi uthuthukise futhi uphinde uthole amandla ngenkathi iPrimperan izobe isimise ukuhlanza ukuze inja ingalahlekelwa izakhi zomzimba neziphuzo eziningi. Isethi yemihlahlandlela yiyona ezosiza inja ukuthi ilulame kancane kancane. Ekugcineni, iPrimperan iwusizo okufanele lubhekwe kulolu hlobo lwamacala.
Ukuphendula okungenziwa yinja yakho nge-Primperan
Yazi ukuthi, uthanda noma ungathandi, kodwa, njengabantu, bangasabela ngendlela efanele ekuthatheni imishanguzo, noma cha. Ngamanye amagama, ungathola ukuthi kukunikeza izinkinga kanti ikhambi libi kakhulu kunesifo. Endabeni yenja ene iPrimperan, akujwayelekile kakhulu ukuthi ukusabela kwenzeke esilwaneni lapho kusithatha, kodwa asikwazi ukungazinaki ukuthi ziyenzeka.
Ngakho-ke, lapha sizokutshela ukuthi yiziphi lezo ezingenzeka. Uma kwenzeka, kungcono ukumise ukwelashwa bese uthintana nodokotela wezilwane ngoba anganikeza ezinye izindlela zalolu hlobo lomuthi, noma aphakamise ezinye izindlela zokwelapha ezingajwayelekile.
Phakathi kokuphendula kukhona: ukungalingani komzimba, ukuma okungajwayelekile, ukuthuthumela, ukozela, isifo sohudo, ukungakwazi ukuma, ukwanda kwengcindezi yegazi, ukungahlaliseki, ulaka, njll.
Zonke lezi zimo kufanele zikwazise njengoba zingakhombisa ukuthi isilwane sakho "asilutho" kunoma yiziphi izingxenye ngakho-ke, asikwazi ukusithatha. Noma kunjalo, ukusabela okuhlangothini kwesinye isikhathi kungaholela ukuthi, lapho ukwelashwa kumisiwe, noma kugcinwa kumthamo ophansi, akuveli. Eqinisweni, uma kwenzeka inja yakho ihlushwa noma iyiphi yazo, izodlula ngesikhathi esifushane (umuthi uyasuswa kungakapheli amahora angama-24 uyidlile).
Ezinye izindlela zokusebenzisa iPrimperan
Abanikazi abaningi abahambisani nokunikezwa umuthi wezinja, noma bazama ukukwenza kube ngokwemvelo ngangokunokwenzeka. Eqinisweni, esimweni sePrimperan, kukhona amakhambi asekhaya angasebenza ngendlela efanayo (noma ngaphezulu) kunomuthi uqobo. Inkinga ukuthi abaziwa njengalokhu.
Elinye lamakhambi okuqala asekhaya ukumnika ukumnika. Akungabazeki ukuthi lapho inja ihlanza, kungahle kube ngenxa yokungahambi kahle komgudu wokugaya ukudla, obangela ukuhlanza. Ngakho-ke, ukusebenzisa amakhambi asiza ukuzola uhlelo lokugaya ukudla kungaxazulula izinkinga zokuhlanza esilwaneni. Kulokhu, ungaya kumuthi wamakhambi akunikeze inhlanganisela yamakhambi bese ulungisa ukumnika. Ngeke uliphuze lishisa, kepha lizobanda ngoba uzoliphuza njengamanzi. Kufanele uzame ukumnathisa kancane, ngaphandle kokumphoqa.
Enye indlela, futhi yezokwelapha, ukusetshenziswa kolunye uhlobo lomuthi ukuyeka ukuhlanza. I-Primperan yaziwa kakhulu, kepha odokotela bezilwane banezinye izindlela ezifana neMetoclopramide, Cleboril, njll. Vele, ngaphambi kokusebenzisa lokhu kuyalulekwa ukuthi uthintane nochwepheshe ngoba kungenzeka ukuthi lezi azilungele kakhulu inja yakho ngenxa yempilo yayo, izinkinga, njll.
Okungafanele ukwenze nenja yakho lapho ihlanza
Ukugula inja yakho akusona isimo esimnandi kunoma ngubani. Eqinisweni, ungakhathazeka ngokweqile futhi ufune ukuthi yonke into ibuyele kokujwayelekile. Inkinga ukuthi, kwesinye isikhathi sithambekele ekwenzeni ngendlela engalungile. Ngalesi sizathu, sizophawula ngakho konke okungafanele ukwenze uma inja yakho ihlanza.
Ukunikeza imithi ngaphandle kokubonisana
Kubalulekile ukuthi noma yiluphi uhlobo lomuthi noma ukwelashwa kudlule kuchwepheshe kuqala. Udokotela wezilwane angazi ukuthi ngabe yini ofuna ukumnika yona okungcono kakhulu angakuthatha ngoba, kwesinye isikhathi, ungamnika okuthile okubeka impilo yakhe engcupheniNgokubheka ukuthi lapho uhlanza ungahle ube buthakathaka futhi amasosha omzimba akho aguqulwe, ukuphendula kuyingozi.
Noma ngabe unamakhambi ahlukile, kungathokozisa ukunikeza udokotela wezilwane isizinda ngoba angakwazi ukuthi ezinye zezinto zala makhambi ziyaphikisana nesilwane sakho.
Yebo no cha. Inja ehlanza akusona isibonakaliso sokuthi okuthile okungathi sína akulungile. Kungenzeka ukuthi ukudla kukugulisile, uzizwe ungaphathekile kahle, noma ezinye izinto eziyinkulungwane. Inkinga ukuthi ukuhlanza kwenzeka kaningana, noma uma "kungavamile." Uma lokho kwenzeka, Awukwazi ukulinda noma ucabange ukuthi uzoyithatha ngosuku olulandelayo.
Ngandlela thile, into engcono kakhulu ongayenza ukubiza udokotela wezilwane umbuze ngakho. Isazi sizokwazi ukukutshela okufanele sikwenze, noma ngabe simthumelela isithombe sehlanza, uye kwababonisanayo noma umane ubheke isimo sakhe uma kwenzeka siba sibi.
Kuvamile. Lapho inja ihlanza, kucatshangwa ukuthi akufanele idle "ukuzihlanza ngaphakathi." Kepha kungabuyela emuva.
Kulungile manje akubaluleki futhi ukuthi umnikeze ukudla okufana nokuhlala njalo, kodwa elula, elula noma eyenziwe ekhaya, njengelayisi elincane elimhlophe ne-York ham, isobho lelayisi, njll. lokho kuyasiza ukuxazulula isisu futhi sibone ukuthi siyasithuthukisa isimo sayo sempilo (futhi ikakhulukazi uma kugcina ukudla namanzi esiswini).
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izifo » Uyisebenzisa nini iPrimperan
Ngiyabonga kakhulu ngezincazelo zakho ezihlakaniphile, kubaluleke kakhulu ukuphuma ezinkingeni ezimweni eziphuthumayo.
Isifo somlenze obomvu ezinjeni